Ahoana ny fomba hanamboarana tanteraka ny telefaona Android | Androidsis
DaniPlay | | Ataovy miavaka ny Android, Tutorials
Raha ny interface amin'ny findainao Android fotoana mety aminao hanovanao ny zavatra rehetra amin'ny dingana vitsivitsy. Mba hampanjifaina azy dia ilaina ny mampiasa ny fikirakirana terminal ary tsy mampiasa fampiharana an'ny antoko fahatelo, satria izany dia hanery anao hanana fiasa voafaritra tsara fa tsy voatery hatao 100% foana.
Betsaka amin'ireo finday avo lenta matetika no manana sary milamina, raha tsy misy sarimiaina, ampio widgets izay mahatonga ny birao hifandray sy hampiasa maody maizina mihitsy aza. Anjaranao ny safidy farany, amin'izay ianao afaka manaraka ny dingana tsirairay raha te hanao ny iray na ny fanovana rehetra.
1 Misafidiana rindrina vaovao
2 Maody na maizina
3 Ampandehano ny maody maizina amin'ny Android Oreo sy ny dikan-teny taloha
4 Manampia Widgets amin'ny efijery an-trano
Misafidiana rindrina vaovao
Ny zavatra voalohany sy mahatalanjona dia ny misafidy rindrambaiko vaovao, ahafahanao maka sary mihetsika, na ny tontolo na ny zavatra, noho izany dia afaka mampiasa sary alaina amin'ny Internet ianao. Matetika ny telefaona dia misy lisitra misy anao, fa hamela antsika hisafidy sary na dia amin'ny fampiharana «Sary» aza.
Midira ovay ny sary an-tsaina mandehana any amin'ny Settings> Display> Styles and Wallpapers (Mety miovaova arakaraka ny mpanamboatra finday io). Raha vantany vao misafidy sary iray ianao dia afaka misafidy ny sary ho efijery an-trano sy ny efijery hidin-trano, manana ny sary rehefa voahidy ny finday.
Raha te hikaroka sy hikaroka sary an-tsary maimaimpoana ianao dia manana Google Wallpapers, misy ao amin'ny Play Store izy io ary tsy io irery no ahafahanao misintona ny toerana misy anao hita maso. Ny safidy hafa dia ny Bing Wallpaper, afaka daholo izy ireo ary miaraka amin'ny lanjany voahitsy.
Maody na maizina
Android 10 afaka nampiasa ny maody maizina malazaRaha te hampihetsika azy dia tsy maintsy miverina amin'ny setting> Screen> Lohahevitra maizina> mampihetsika azy raha tianao ny maody maizina fa tsy ilay efa mazava be izay napetraka aorin'ireo fitaovana rehetra.
Ao amin'ny Android Pie ny safidy dia ao anatin'ny safidin'ny Screen Ao anatin'ny menio Settings, raha manana Android One ianao dia azo jerena ao amin'ny setting> Display> Advanced> lohahevitra Device, ny maody maizina amin'ity tranga ity dia haseho amin'ny ampahany amin'ny fitaovana.
Ampandehano ny maody maizina amin'ny Android Oreo sy ny dikan-teny taloha
Mba hahafahana mampihetsika azy amin'ny kinova alohan'ny Android Pie dia ilaina ny mampiasa rindranasa ivelany, raha tianao ny maody maizina dia io ihany no solony. Ho an'izany tsy maintsy mampiasa Nova Launcher izahay, ao amin'ny sehatr'asa dia tsy maintsy hampavitrika ny Night Mode isika ary tsy io irery no fampiharana ahafahanao mampiasa azy ao anatin'ny Play Store.
Manampia Widgets amin'ny efijery an-trano
Ny fomba azo atao indrindra mankany amin'ny widgets haingana tsindrio fotsiny eo amin'ny birao mandritra ny segondra vitsy amin'ny habaka izay tsy misy fampiharana. Raha vantany vao nosokafana dia ho azo atao koa ny misafidy lohahevitra Android ho an'ny ambadiky ny efijery sy ny fikirakirana "Home" isan-karazany.
Mba hahitana taratra widget eo amin'ny efijery an-trano dia sintomy mankany ambony izy, na ny kalandrie, tsoratadidy, fidirana amin'ny rindranasa ampiasainao matetika, ankoatry ny hafa misy. Ireo hitsin-dàlana ireo dia mivantana sy azo tanterahina haingana sy mora.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba hanamboarana tanteraka ny findainao Android
Ny Night Vision dia rindrambaiko ahafahanao mahita amin'ny maizina miaraka amin'ny Galaxy S20, Note 10+ ary S10 5G
Ny rindrambaiko Vivavideo dia mamindra fitaovana Android 50 tapitrisa